एक्काइसौँ सताब्दीको विश्वः हिउँ र बादलको पनि चोरी गरियो
तेहरान, तपाईले आजसम्म बहुमूल्य बस्तुदेखि लिएर माया प्रेममा निद्रा चोरी भएको कुरा त सुन्नु भएको छ । तर, बादलको चोरी भएको घटना हालसम्म सायद सबैका लागि नयाँ हुन सक्छ ।
९० दशकको सुरुवातबाट मनाउन थालिएको नो पेन्टी डे
जुन २२ लाई नो पेन्टी डे को रुपमा मनाइने गरिन्छ । इन्टरनेटको विस्तार भएसंगै सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट जुन २२ लाई पेन्टी दिवस मनाईदै आएका छन् । हाम्रो नेपालमा गणतन्त्र दिवस,
३ वर्ष पुरानो एक अनौठो परम्पराः भुत विवाह
परम्परागत अनुसार यदि कुनै परिवारमा अविवाहित पुरुषको मृत्यु भएमा त्यसलाई अशूभ मानिन्छ र त्यस्तो मरणलाई श्राम ठानिन्छ र मृत्यु भएको अविवाहित पुरुषलाई एक्लै अन्त्येष्टि नगरिने भएको हुनाले चीनको साङ्सी प्रान्तमा
लौ आयो झ्यालै नभएको हवाईजहाज !
के तपाइँ झ्याल नभएको हवाईजहाजमा चढेर बाहिरी संसारबाट अलग भएर समुद्रमाथिको आकाशमा ८/९ घण्टाको यात्रा गर्ने कुराको कल्पना गर्नुभएको छ तपाइँको यस्तो कल्पना अब पूरा हुनेवाला छ । किनकि दुबईको
काठमाडौ । भोलिबाट शुरु हुने बिश्व कपले अहिले सबैको ध्यान रसिया तर्फ मोडेको छ ।बिश्वका फुटवल प्रेमीहरु अहिले रसिया पुग्ने होडबाजीमा छन । यस अघि बिश्पकप शुरु हुनु भन्दा अघि
यस्ता किसान जसले फलाए एउटै रुखमा ५१ जातका आँप
एजेन्सी, एकजना इन्जिनियर आफ्नो गाउँको अवस्था सुधार्ने भन्दै खेती किसानीमा लागेका छन् । खेती गर्न थालेका इन्जिनियरले साँच्चीकै चमत्कारै गर्न थालेका छन् । उनले एउटै बोटमा ५१ जातका आँप फलाएर
नासा, (एजेन्सी) अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासामा आबद्ध पेगी विट्सनले अमेरिकाका अन्तरिक्ष यात्रीमध्ये सबैभन्दा लामो समय अन्तरिक्षमा बिताएकी छिन्। विट्सनले कुल ६ सय ६५ दिन अन्तरिक्षमा बिताएर उक्त कीर्तिमान बनाएकी हुन्।
यस्ताे गरेर दुब्ली देखिइन त यी युवती ?
काठमाडौं । आजभोलीका युवती पातलो देखिन चहान्छन् । पातलो देखिनका लागि एउटी युवतीले सामाजिक सञ्जालमा अनेक गरेकी छन् । यी २० बर्षिया मेरी जैलकोव्सी हुन् जो दैनिक आफ्ना तस्बिर सोसियल
दश हजार पुरुषसँग यी युवतीले कसरी गरिन् होला सेक्स ?
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा एक युवतीले १२ वर्षसम्मको वेश्यावृत्तिका दौरान कम्तीमा १० हजार पुरुषसँग सेक्स गरेको दाबी गरेकी छिन् । अष्ट्रेलियन नागरिक ३९ वर्षीया ग्वेनेथ मोन्टेनेग्रोले यस्तो दाबी गरेर सबैलाई चकित
अनारबाट हेपाटाइसिस ए संक्रमित महिलाको मृत्यु
सिडनी, (एजेन्सी) चिस्याइएको अनार खाँदा हेपाटाइसिस एबाट संक्रमित भएकी एक अस्ट्रेलियाली महिलाको मृत्यु भएको अस्पताल सूत्रले बुधबार जनाएको छ । ६४ वर्षीया ती महिलाको उपचारकै क्रममा गत साता साउथ अस्ट्रेलियामा
सेना र प्रहरीमा भर्ना गर्नुअघि दुई औँलाको भर्जिनिटी टेस्ट
काठमाडौं । इन्डोनेसियामा उच्च शिक्षा पास गरेका १८ देखि २० वर्षका युवतीलाई सेना र प्रहरीमा भर्ना गर्नुअघि भर्जिनिटी टेस्ट अनिवार्य छ । ह्युमनराइट वाचले गरेको अध्ययनअनुसार यस्तो परीक्षण हवाई फोर्स,